Qorshaha ka Jawaabida COVID-19 ee Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis
SOOMAALI: Qorshaha ka Jawaabida COVID-19 ee Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis
MPS Home > COVID-19 Response Plan > SOOMAALI: Qorshaha ka Jawaabida COVID-19 ee Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis
Dusiyada Dadweynaha Minneapolis qorshaha ay uga Jawaabeyso xaalada COVID-19 qorshahaan wuxuu siiyaa macluumaad muhiim ah ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha inay ka caawiyaan qof walba inuu la qabsado nolosha iyo waxbarashada xilliyadaan adag. Cusboonaysiinta boggan ayaa loo sameeyey macluumaadka in lagu siin doono inay ardaydu ay ka qaybqaataan Waxbarashada massaafada fog Distance Learning iyo in macluumaadka cusub loogu diyaariyo.
Wareegtada fulinta ee ka soo baxday xafiiska gudoomiyeha gobolka Walz Walz, iskuulada MPS DHISMAYAASHA DUGSIYADA waa la xirayaa laga bilaabo Maarso 17 ilaa inta ka hartay sanad dugsiyeedka si loo yareeyo fiditaanka COVID-19 (coronavirus).
In kasta oo ay dhismayaasha dugsiyadu xiran yihiin, ardayda MPS waxay wali sii wadayaan waxbarashadooda iyaga oo loo marinaayo Waxbarshada Masaafada fog Distance Learning, kuwaas oo billowday Abriil 6, 2020..
Waxaa boggaan ka heli kartaa wixii Jawaabaha iyo su'aalaha mowduucyada soo socda;latest family updates here Waxaa boggaan ka heli kartaa wixii Jawaabaha iyo su'aalaha mowduucyada soo socda;.
Adeegyada Cunnada Caruurta; Qoysas barakacay; ilaha cuntada, dharka, dhaqaalaha, daawooyinka
Fayo-qabka iyo Caafimaadka Maskaxda
Waxbarida iyo dhibcaha buundooyinka
Waxbarashada Gaarka ah iyo Adeegyada 504
Kooxaha Gaarka ah ee Ardayda
FDaryeel Xanaanada caruurta oo Bilaash ah loogu talagalay Shaqaalaha Gurmadka iyo Shaqaalaha Caafimaadka
Dhismeyaasha MPS iyo Goobaha Ciyaaraha
1. Adeegyada Cunnada Caruurta; Qoysas barakacay; ilaha cuntada, dharka, dhaqaalaha, daawooyinka
a. Sidee ayey qoysasku ugu heli karaan cunno carruurtooda inta iskuulku xiran yahay?
Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis ayaa siiya cunno bilaash ah cunug kasta oo jira 18 sano iyo wixii ka yar, waxaana laga heli karaa cunooyinkaas ilaa iyo 50 goobood oo magaalada ku kala yaala inta ay dugsiyadu u xiran yihiin xaalada COVID-19; Eeg halka ay goobahaani ku yaalliin iyo wixii macluumaadka la xiriira; Eeg halka ay goobahaani ku yaalliin iyo wixii macluumaadka la xiriira.
b. Qoysas barakacay; ilaha cuntada, dharka, dhaqaalaha, daawooyinka
Qoysaska u baahan taageero deg-deg ah ee Guryaha:
Ururka Laanqayrta Cas waxay abaabushaa hoyga xaaladaha degdegga ah ee loogu talagalay dadka sida ku meel gaarka ah ugu barakacay dhacdooyinka dhow awgood: 612.871.7676; kodka 1.
Qoysaska ay soo food saartay dhibaato guri oo aan la xiriirin dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxay la xiriiri karaan kooxda hoyga ee Hennepin County: 612.348.9410.
Cunto, dhar, maaliyad ama gargaar daawo, City of Minneapolis has a list of resources loogu talagalay dadka deegaanka magaaladeena ee u baahan caawimaad.
Hadaad ubaahantahay caawinaad helitaanka agab dheeri ah, la xiriir adeegahaaga bulshada iskuulka ee iskuulkaaga. Waad ogaan kartaa ruuxa adeegahaaga bulshada uu yahay adigoo wacaya iskuulkaaga ama khadka tooska ah ee Taageerada Caafimaadka Maskaxda ee MPS 612.767.4158.
2. Fayo-qabka iyo Caafimaadka Maskaxda
a. Maxaan sameyn karaa haddii aan ka walwalo in cunugeyga uusan helin taageerada caafimaadka dhimirka ee ay ka heli jiray dugsiga?
Haddii uu ardaygaagu heli jiray adeegyada caafimaadka maskaxda ee ku saleysan dugsiga markii la dhiganaayey, adeegyadaan wali waa la heli karaa markii iskuuladii la xiray. Dhaqtarka bixiyaha daryeelaha caafimaadkaaga waa inuu horeyba kuula soo xiriiraa ama waad wici kartaa adeegaha shaqaalaha bulshada iskuulkaaga si uu kuugu xiriiriyo. Rugaha caafimaad ee ku saleysan dugsiga sare waxay wali bixiyaan adeegyadooda waxayna sidoo kale u fidin karaan adeegyada caafimaadka maskaxda ardayda.
b. Waa maxay taageerada ay heli karaan qoysaska inta lagu jiro waqtigan adag?
Caawimaadyo fara badan ayaa loo heli karaa qoysaska iyo ardayda si looga caawiyo waqtigaan qalafsan, Taageerooyinkaas ay ku jiraan khadka taageerada caafimaadka maskaxda 612.767.4158; fadlan booqo bogga Taageerada Caafimaadka Maskaxda wixii macluumaad dheeri ah iyo agab Taageerada Caafimaadka Maskaxda wixii macluumaad dheeri ah iyo agab .
Barayaashayada sidoo kale waxaa ka go'an oo ay diiradda saaraan sidii ardayda loo siin lahaa waxbarashada dabeecada bulshada (SEL). Shaqaaluhu waxay ardayda iyo qoysaska siin doonaan hagida SEL labadaba iyada oo warqad ama qaab dijitaal ah oo qayb ka ah waxbarashada Massaafada Fog Distance Learning. Macalinkaaga iyo maamulahaaga ayaa siin kara macluumaad dheeraad ahwaa hadii aad codsato.
Liiska ilaha gargaarada bulshada ayaa sidoo kale la heli karaa. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan agabyada kale, fadlan kala xiriirThaddeus Lesiak Xaruntayada Waxtarmada Qoyska 612.668.4281.
c. Khadka Caawinta Midab-Takoorka: 1.833.454.0148
Haddii aad la kulantay ama aad aragtay midab-takoor ka dhan ah dadka Aasiya, fadlan u soo sheeg Waaxda Xuquuqda Aadanaha ee Minnesota taleefanka lacag la'aanta ah: 1.833.454.0148. Khadku wuxuu furan yahay Maalinta Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo.
a. Sidee ayey Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis ugu gaarsiiyaan macluumaad muhiim ah qoysaska iyo ardayda wixii ku saabsan waxbarashada massaafada fog Distance Learning?
MPS waxay sii wadeysaa inay si joogto ah qoysaska ugu wargaliso macluumaadka la xiriira xaaladaha COVID-19, oo ay kujirtowaxbarashada massafada fog, iyada oo loo maro kanaalkeeda isgaarsiinta ee kala duwan: emaylalka, robocalls, warbaahinta bulshada, fiidiyowga, raadiyaha iyo barta internetka degmada; Macluumaadka lama huraanka ah waxaa sidoo kale lagu turjumayaa luuqadaha afka Hmong, Soomaali iyo Isbaanish.
Haddii shaqsiyaadka aysan ka helin jawaabaha su'aalahooda ilahaas, waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ugu yeeraan Xarunta Isgaarsiinta Degdegga 612.668.0000 oo ay shaqeeyaan 24/7, toddobada maalmood ee usbuuca; adeegyo luqado badan ayaa sidoo kale lagu bixiyaa lambarkan. Sidoo kale waad soo diri kartaa emayl answers@mpls.k12.mn.us.
Qoysaska waxaa sidoo kale lagu dhiirigelinayaa inay la xiriiraan ilmahooda maamulaha dugsiga ama macallinka si looga caawiyo su'aalahooda.
Waxbarshada Massaafada Fog waxa laga filaayo ee aqligalka ah ayaa loo gudbiyey qoysaska iyo ardayda maadama macluumaadka lagu horumarinayo kanaalkan wada xiriirka.
4. Taageerada Teknolojiyada
a. Maxaan sameeyaa haddii ilmahaygu u baahan yahay aalada kumbuyuutarka si uu uga qeyb qaato waxbarashada massaafada Fog?
Fadlan booqo boggan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan waxa MPS ay sameyneyso si ay ardayda ugu siiso aalado loogu talo galay waxbarashada massaafada Fog.
b. Yaan kala xiriireynaa haddii aan dhib ku qabno isku xirka internetka ama aan heysano arrimo kale oo teknoolajiyada ah?
Ardayda walaac ka qaba tikniyoolajiyadda waa inay khadka taleefanka kula xiriiraan Qadka Adeegga MPS taleefanka 612.668.0088; Shaqaalaha waxaa la heli karaa aalinta Isniinta ilaa Jimcaha, inta u dhaxaysa 7:30 aroor ilaa 4:00 pm.
Haddii ardaydu ay ku dhibtoonayaan barnaamij ka mid ah casharka macalinkooda u xilsaarey, fadlan la xiriir macallinka marka hore. Haddii macallinku uusan xallin karin arrinta, fadlan la xiriir qadka caawimaadda kor lagu soo sheegay.
c. Maxay yahiin ilaha kale ee marinka internetka laga heli karo?
Magaalada Minneapolis waxay ku siineysaa WiFi bilaash ah magaalada Minneapolis dadka u baahan kara internet ku meelgaar ah inta lagu gudajiro xaalada COVID-19. Si kastaba ha noqotee, ku xirnaanta internetka ayaa xaddidan aalad internetka xoojiye ayaa loo baahan yahay. Booqo this webpage for more information.
5. Instruction and Grading
a. Muxuu ilmahaygu u baahan yahay inuu sameeyo si loogu bilaabo waxbarashada massaafada fog, taas oo bilaabmaysa Abriil 6, 2020?
Macallimiintu waxay xiriir dhow la yeelan doonaan ardayda si ay u bixiyaan hagitaan inta lagu guda jiro kala-guurka Barashada Fogaanta. Muuqaalka guud oo ku saabsan sida lagu bilaabayo fasalka Google ama Seesaw, fadlan dhagsii macluumaadka ee hoosta:
Getting Started with Google Classroom (for students)
Getting Started with Seesaw (for students)
b. Sidee bay u ekaan doonaan waxbarashada masaafada fog ee cunuggayga da'da dugsiga ka hor?
Waan ognahay in ardayda da'da yari ay sida ugu wanaagsan wax u qabtaan marka ay ku mashquulsan yihiin howlaha gacan ka qabadka, khibradaha gacanta iyo ciyaarta. MPS, bartayaasha da'da yar waxay ka qeyb qaataan nashaadaadyo kor u qaadaya hal abuurka, sahaminta nolosha dhabta ah, jimicsiga jirka, horumarka luqadda, iyo is dhexgalka bulshada ee muhiim u ah horumarka ilmaha.
Ardayda dugsiga barbaarinta iyo daryeelayaashooda waxay fursad u leeyihiin inay ka qayb qaataan casharrada usbuuca oo dhan siyaabo kala duwan u baxaaya. Dhammaan qorshooyinka macallinka waxaa ka mid ah nashaadaadyada maalinlaha ah ee qaybaha soo socda: Wax qorista iyo Luuqada, Xisaabta, sayniska, farshaxanka, Firfircoonaanta jirka iyo nashaadaadka jimicsiga, iyo barashada dabeecadaha bulshada.
Macallimiinta Barnaamijka Carruurnimada Hore waxay u isticmaali doonaan waqtiga shaashadda inay ka dhex muuqdaan oo ay la falgalaan ardayda iyo daryeelayaashooda haddii ay doortaan inay adeegsadaan teknolojiyad. Ardayda ayaa leh is-dhexgal maalinle ah oo ay la yeeshaan macallimiinta shatiga laysinka leh iyada oo loo marayo horumarin- iyo dhaqan ahaan ku habboon maadooyin iyo dhexdhexaad sida Google Classroom, SeeSaw, emayl ama farriimaha websaydhka.
Macallimiinta waxbarashadda gaarka ah ee caruurnimada hore waxay siinayaan waxbarid gaar ah oo ku habboon arday kasta sida ku qeexan Shakhsiyadooda Distance Learning Qorshaha (hoos ka fiiri wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah).
Qoysasku waxay waliba ka heli karaan nashaadaadka preschool learning enrichment activities on the MPS website. MPS waxay sidoo kale ku xiriirineysaa ardayda iyo daryeelayaasha iyadoo bixineysa xirmooyin kobcinta casharada oo warqado ah oo laga heli karo goobaha cuntada lagu bixiyo ee MPS food distribution sites.
c. Maxaan samaynaa haddii aanan haysan tiknoolajiyadda iyo marinka internetka ee waxbarashada internetka?
Fadlan booqo visit this page for the most current information waxay Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis ay sameyney karto si ay u siiso kumbuyuutarada ardayda aalado loogu talagalay waxbarashada Massaafada fog.
d. Ilmahaygu ma la yeelan doonaa is-dhexgalka maalinlaha ah ee macalinka?
Haa, laga soo bilaabo bishii Abriil 6, macallinka ilmahagu wuxuu u diri doonaa farriin maalinle ah oo maalmaha dugsiga jiro. Macallimiintu waxay sidoo kale la xiriiri doonaan ardayda saacadaha ay ku jiraan khadka tooska ah ee internet-ka oo ay diyaar u yihiin inay kaga jawaabaan baahiyaha ardayda taleefan iyo / ama emayl ahaan.
e. Sideed u qiimeyn doontaa dhibcaha darajada cunugeyga inta lagu jiro waqtigaan?
Isbedelada dhibcaha darajooyinka rubucyada 3aad iyo 4aad waxaa la sameeyay sababtuna tahay waxbarashada Massaafada Fog; fadlan eeg macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan sida darajooyinka loo samayn doono halkan.
Macalimiintu waxay sii wadi doontaa in ay ku qoraan horumarka ardayga ee Gradebook oo sii joogi doonaan ay heli karaan qoysaska iyada oo loo maraayo Parent Portal.
f. Sidee bay barayaashu ula socon doonaan imaanshaha ardayda?
Macallimiintu waxay raadraaci doonaan xaadirinta iyagoo ku baranaya ka-qayb-qaadashada barashada casriga ah khadka tooska ah ama xiriirka ardayda kale sida qoraalka, emaylka iyo taleefannada.
g. Maxaan sameeyaa haddii ilmahaygu buko oo aanu tegi karin xiisadaha khadka tooska ah?
Qoysasku waa inay raacaan tilmaamaha caadiga ah ee MPS oo ay soo wacaan MPS si ay u soo sheegaan maqnaanshaha sidaa darteed waxaa lagu calaamadayn karaa cudur daar. Laakiin halkii laga wici lahaa khadka imaanshaha dugsigaaga, si loo soo sheego maqnaanshaha, qoysasku waa inay wacaan 612.668.1200.
6. Heerarka Imtixaanada Caadiga ah
Tilmaamo kasta oo ka socota Wasaarada Waxbarashada Minnesota, wixii ka dambeeya Maarso 27 ma jiro imtixaanka MCA-yada laga maamuli doono dugsiyada Minnesota.
b. International Baccalaureate (IB)
Imtixaannada Barnaamijka Dibloomada ee IB ayaa la joojiyay; Eeg waraaqda MPS PS letter to families ee qoysaska ogeysiinaysa qoysaska in la joojiyey. Macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan sida ay ardaydu ku heli doonaan dhibcaha IB, qoysaska waa in ay email ugu diraan macallinka Barnaamijka Dibloomada ee IB ama u soo booqdaan International Baccalaureate Organization.
c. Meelaynta Horumarsan (AP)
Imtixaannada AP ayaa khadka tooska ah loo wareejiyey. Macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan sida ardaydu ugu galayaan imtixaanka AP, fadlan emaylka ardayga ee macallinka AP ama u aad AP website.
Imtixaanka ACT ayaa dib loo dhigay ilaa iyo bisha Juun 13, 2020, ama taariikhda imtixaanka qaran ee mustaqbalka. Wixii cusboonaysiin dheeraad ah, fadlan booqo ACT website.
7. Waxbarashada Gaarka ah iyo Adeegyada 504
a. How will my child’s IEP be met?
Qorshaha Barashada shaqsiga ee Gaarka ah ayaa loo abuuri doonaa arday kasta oo hela adeegyada waxbarashada gaarka ah. Qorshaha waxarashada massaafada Fog ayaa ka hadli doona sida ugu wanaagsan ee loo daboolo baahida ardaydaada iyada oo loo marayo hannaan Waxbarid Fog ah, meeshii ay suurtagal tahay, oo ay ku jiraan tilmaamaha gaarka ah ee tooska ah, adeegyada la xiriira, wax ka badalida iyo dejinta inta lagu gudajiro Distance Learning.
a-qabsiga qalabka iyo tikniyoolajiyadda caawinta ayaa la bixin doonaa haddii ay suurtagal tahay. Maamulayaasha kayska ayaa bixin doona tilmaamo iyagoo adeegsanaya tikniyoolajiyad, warqad, qalin ama sanaadiiqda shaqada si loo haqabtiro baahida arday kasta.
Horumarka laga sameeyo meelaha baahida ardasydu ka qabaan waxbarashada khaaska ah ee wax laga qabanayo inta lagu gudajiro barashada masaafada fog waxaa lagu cabiraayaa isbarbar dhigga heerka xirfadeed ee ardayga bilowga kadibna dhamaadka Distance Learning. Maareeyayaasha kiisaska ayaa isticmaali doona xogta laga soo ururiyey korjoogteynta horumarka si ay u cabbiraan koritaanka, dayactirka ama dib-u-cusbooneysiinta xirfadaha ama dabeecadaha
Haddii qiimaynta ardayga naafada ahi u baahan yahay kulan fool ka fool ah ama indho indhayn, qiimaynta waxaa laga yaabaa in loo baahdo in la daahiyo illaa inta dib dugsiga dib loo furayo. Qiimaynta iyo dib-u-qiimeynta ee aan u baahnayn qiimaynta fool-ka-foolka ama indho indhayn ayaa dhici kara inta dugsiyadu xidhan yihiin.Waxbarashada Gaarka ah iyo Waxbarashada Hindida ayaa ka shaqeyn doonta iskaashiga dugsiyada iyo kooxaha sidii loogu xiri lahaa qoysaska iyo ardayda si loo bixiyo adeegyo inta lagu jiro Barashada Fog..
b. Sidee casharada waxaa loo bixin doonaa iyadoo la tixgelinaayo ardayda leh qorshaha 504?
Maamulaha kayska 504 ee ardaygaaga ayaa iskaashi la yeelan doona macallimiinta iyo shaqaalaha taageerada ee la xidhiidha si loo qorsheeyo hirgelinta hoy iyo adeegyo inta lagu jiro Barashada Fog. 504 maareeyayaasha kiiska iyo isku duwaha 504 ee degmada ayaa diyaar u ah inay ka tashadaan sida ugu wanaagsan ee cunuggaaga loogu dejin lahaa guriga inta lagu jiro Barashada Fogaanta. Kooxuhu 504 waxay ku kulmi karaan kalfiidiyaha fasalka, taleefanka ama emaylka si ay u qabtaan shirar qiimeyn ah ama shirarka Qorshaha 504.
8. Kooxaha Gaarka ah ee Ardayda
a. Sideen ku hubin karaa in ilmahaygu helo barnaamijka bartaha Ingiriisiga (EL)?
Dugsiyadu waxay leeyihiin hagitaan ay ku isticmaalaan ilahahooda luqadaha badan (khadka Luuqadaha) iyo shaqaalaha inay la xiriiraan qoysaska iyo ardayda. Macallimiinta EL waxay la kulmi doonaan (la xiriiri doonaan) ardadooda iyo / ama qoysaska hal ilaa laba jeer usbuucii si ay u dejiyaan yoolalka, ay u taageeraan barashada oo ay u siiyaan ra'yi-celin. Tilmaanta EL waxay ka kooban tahay hal shir oo lagu daray taxanaha casharo loogu talagalay in lagu taageero ardayda sidii loo horumarin lahaa xirfadahooda Ingiriisiga. Macallimiinta fasalka ayaa toddobaad kasta la shaqeyn doona macallimiinta EL si loo hubiyo in waxbarashadu ay taageero u leedahay ardayda ku hadasha luqadaha badan.
b. Maxaa taageero ah oo loogu talagalay qoysaska guri-laawayaasha ah?
Qoysaska ay la soo daristay hoy la’aan waa inay kala xiriiraan shaqaalaha arrimaha bulshada iskuulka wixii macluumaad ah ee ku saabsan agabyada iyo taageerada. Haddii aadan awoodin inaad la xiriirto shaqaalahaaga bulshada ama aad su'aalo dheeraad ah qabtid, fadlan kala xiriir Charlotte Kinzley charlotte.kinzley@mpls.k12.mn.us or 612.668.5480.
c. Sidee Xafiiska Guusha Ardayga Madow (OBSA) uu sii wadi doonaa inuu ka caawiyo ardayda barnaamijka Boqorka iyo boqorada King iyo Queens?
OBSA waxay ku taageeri doontaa Boqorka iyo Boqotada xilliga kala guurka ee waxbarashada massaafada Fog iyadoo loo taageerayo ardayda sidii loo waafajin lahaa isbeddelka caadiga ah; isku dheellitirka mas'uuliyadaha qoyska; ku mashquulida goob waxbarasho cusub; walwal iyo jahwareer; Tababarka Nolosha; dhammaystirka shaqada maaddada aasaasiga ah; dejinta waxbarasho iyo himilo shaqsiyeed; iyo isticmaalka tikniyoolajiyadda. Macluumaad dheeri ah, fadlan kala xiriir Michael Walker michael.walker@mpls.k12.mn.us.
d. Maxay yahiin ilaha bulshada iyo iskaashiga ay qoysasku ka heli karaan haddii ay leeyihiin ilmaha u nugul dhibka?
Dhakhaatiirta cilmu-nafsiga ee iskuulka, la-taliyayaasha iyo shaqaalaha bulshada ayaa la xiriira ardayda iyo qoysaska si ay u bixiyaan adeegyo taageero ah si looga caawiyo hubinta ardayda inay ku howlan yihiin Waxbarashada Massaafada Fog. . Waxbarashada Massaafada Fog. Adeegyada iyo taageerooyinku way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran baahiyaha arday kasta. Shaqaalaha taageerada ayaa diyaar u ah inay kala tashadaan macallimiinta wax ku saabsan baahiyaha ardayda.
MPS' Waaxda Waxbarshada Hore ee Carruurnimada MPS iyo barnaamijkeeda dugsiga barbaarinta High Five, iyo PICA Head Start iskuulada xanaanada gaarka loo leeyahay ayaa iska kaashanaya shaqaalaha MPS si ay u siiyaan Barasho Fogaanta ardayda nugul..
9. Daryeelka xanaanada caruurta oo Bilaash ah oo loogu talagalay Shaqaalaha Gurmadka iyo Shaqaalaha Caafimaadka
Haddii aad u qalanto caawimaada xaalad deg-deg ah oo muhiim ah ama xirfadle daryeel caafimaad sida uu qabo amarka fulinta Governor Walz’s executive order, MPS waxay siineysaa xanaano caruur oo bilaash ah kuwa leh cunug ka diiwaangashan dugsiga MPS. Shakhsiyaadka waxay u baahan yihiin inay keenaan caddeyn shaqadooda qaab warqad ah oo ka timid loo shaqeeyahaaga ama aqoonsiga shaqaalaha kale.
Adeegyada waxaa loogu talagalay carruurta da'doodu u dhaxayso 4 ilaa 12 waxaana la siiyaa Isniinta-Jimcaha laga bilaabo 7:30 subaxnimo - 4:30 pm meelaha loogu talagalay (goobaha waxay furan yihiin 6:30 aroor - 6 pm). Ardayda ayaa laga yaabaa in bas loogu raaco barnaamij markay tahay 7:30 aroornimo iyo bixitaanka 4:00 galabnimo. Si aad isu qorto, emayl mpls.kids@mpls.k12.mn.us ama wac 612.806.1602.
10. Dhismeyaasha MPS iyo Goobaha Ciyaaraha
Si looga hortago faafitaanka COVID-19, iyo sida ay ku talisay Gobolka Minnesota, dhammaan dhismayaasha iskuulka waa in la xiro (marka laga reebo goobaha daryeelka degdegga ah maalintii) iyo dhammaan qalabka garoonnada lagu ciyaaro ee ku yaal hantida MPS waa laga xiri doonaa dadweynaha illaa ogeysiin kale. Saxeexida ogeysiinta dadweynaha xiritaanka waxaa lagu muujiyey garoomada iskuulka
Qalabka ciyaarta ayaa kaliya loo heli karaa oo loo isticmaali karaa barnaamijyada daryeelka ilmaha ee degdegga ah ee la raacaya habraacyada soo socda:
Ha isku qasin kooxaha carruurta markay bannaanka joogaan.
Ciyaar Bulsheed ahaanta kaliya carruurta kale ee ay wakhti isla qaataan maalintii.
Awood wadaagin qalabka u dhexeeya kooxaha caruurta, laakiin lahaanshaha kubadaha koox gaar ah, xargaha boodhka, iyo qalabka kale ee ciyaarta, iwm.
Ma jiraan qalab ku filan koox kasta ama iyagu gooni u leeyihiin, ka dibna qalabka nadiifinta inta u dhexeysa waqtiyada ciyaar kooxeed.
Ma jiro ciyaaro ku lug leh taabashada kuwa kale.
Tixgeli waxyaabaha carqaladeynaya ee aan u baahneyn carruurtu inay taabtaan ama qabsadaan qalabka.
Maydho gacmaha dhaqid ka hor iyo ka dib wakhtiga dibedda.
Waxaan raali gelin ka bixinaynaa wixii qalalaasaha ku dhaca oo aan u mahadnaqaynaa iskaashiga dadweynaha.